एक्लै यात्रा वा संगठित समूहमा - दुई मध्ये कुन म छनौट गर्छु? | Absolut यात्रा
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ यदि एक्लै यात्रा गर्नुहोस् वा एक संगठित समूहमा? खैर, यो भन्नुपर्दछ कि यो एक प्रश्न हो जुन उत्तर दिन सधैं सजिलो हुँदैन। कुनै पनि भन्दा बढि किनकि यसमा हामी दुई पूर्ण रूपमा वैध विकल्पहरू पाउँछौं र उनीहरूका फाइदाहरू साथै हानिहरूमा पनि।
El यात्रा यो केवल एक अनुभव हुन सक्छ तर संगठित समूहमा यात्रा पछाडि छैन। तसर्थ, जब हामीलाई शंका छ, अन्तिम निर्णय गर्नु अघि यसको सबै मुख्य बुँदाहरूको विश्लेषण गर्नु राम्रो हुन्छ। के तपाइँ एक पटक र सबैको लागि निर्णय गर्न चाहानुहुन्छ? हामीसँग समाधान छ!
1 एक्लै यात्रा गर्दै: महान लाभ र हानि
1.1 एक्लै यात्रा को लाभ
1.2 एक्लै यात्रा को बेफाइदाहरु
2 एक संगठित समूह मा यात्रा: हो वा होईन?
2.1 एक समूह मा यात्रा को लाभ
2.2 एक समूह मा यात्रा को बेफाइदाहरू
3 एक्लै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा एक संगठित समूहमा?
एक्लै यात्रा गर्दै: महान लाभ र हानि
एक्लै यात्रा को लाभ
कुनै श doubt्का बिना, एक्लै यात्रा गर्नुको एक ठूलो फाइदाहरू यो हो जुन तपाईंसँग हुनुहुन्छ धेरै बढी स्वतन्त्रता निर्णय गर्नु। एक तर्फ, तालिकाको मामलामा र अर्कोतर्फ, ती क्षेत्रहरूमा जुन तपाईं भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने यदि तपाइँ अधिक वा कम लिनुहुन्छ तपाइँ के गर्न योजना गर्नुहुन्छ, योजनाहरू सँधै अन्तिम मिनेटमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यसले तपाइँलाई हामीले उल्लेख गरेको स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, सबै कुरा तपाईको खातामा चल्दछ, यो सत्य छ कि तपाई गन्तव्य छनौट गर्दा, यात्रा आफैं, होटेलहरू आदि व्यवस्थित गर्दा राम्रो पैसा बचाउन सक्नुहुनेछ।
एक्लै यात्रा को बेफाइदाहरु
धेरै मानिसहरु लाई जोसँग छ एक्लै यात्रा गर्ने बानीउनीहरूसँग त्यस्तो कमजोरीहरू छैनन्। तर यदि हामीले कुनै हाइलाइट गर्नुपर्‍यो भने, यो हो कि हामीले सम्पूर्ण यात्रालाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो सबै भन्दा राम्रो भाग हुन सक्छ। किनकि यसले हामीलाई लामो र सायद लिने छ, कहिलेकाँही हामीले होटेलको छनौट वा केही अनुबन्धित गतिविधिहरूको लागि पनि गल्ती गर्दछौं। तर जब यस प्रकारको 'डिटेल्ट' हुन्छ तब यो हाम्रो जीवनमा थप्ने उपाख्यान पनि हुन्छ। धेरैको लागि, एक्लो हुनु पनि अप्ठ्यारो युद्ध हो जब केही असुविधा हुन्छ, किनभने हामीसँग मद्दत हुँदैन।
एक संगठित समूह मा यात्रा: हो वा होईन?
एक समूह मा यात्रा को लाभ
मुख्य व्यक्तिहरू मध्ये एक त्यो हो तपाईं नयाँ व्यक्तिलाई भेट्नुहुनेछ, त्यसैले यो पनि यात्रा को एक सबै भन्दा राम्रो क्षणहरू हुनेछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं अन्य देशहरूमा भ्रमण गर्नुहुन्छ जहाँ भाषा एक समस्या हुन सक्छ, समूह अब त्यस्तो हुनेछैन। किनभने त्यहाँ सँधै मार्गनिर्देशक वा संयोजक हुनेछन् जसले सबै कुराको ख्याल राख्नेछन्। यदि होईन भने, तपाईका सहकर्मीहरू बीचमा पक्कै पनि कोही त्यस्तो व्यक्ति छ जसले आफूलाई बचाउँछ। तपाईंसँग अधिक सुरक्षा छ, किनकी सबै चीज सजीलो रूपमा जान्छ, वा यदि समस्या देखा पर्‍यो भने तपाईं जहिले पनि मानिसहरूले घेरेको हुन्छ। त्यसोभए दुबै केसहरूमा, यो सबै कुरा राम्रो भएको हुन सक्छ। साथै, हाम्रो जीवनको महान क्षणहरू साझा भन्दा बढि सुन्दर के छ? अर्कोतर्फ, हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि हामीले केहि पनि संगठित गर्नुपर्दैन र यो समय र टाउको दुखाइ हो जुन हामीले बचत गर्छौं। यद्यपि यस प्रकारको यात्रा केवल यो बुढो व्यक्तिको लागि मात्र हो भन्ने धारणासँग जोडिएको छ, सत्यबाट केही पनि छैन किनकि धेरै भन्दा धेरै युवाहरू पनि उनीहरूमा व्यस्त छन्।
एक समूह मा यात्रा को बेफाइदाहरू
विशाल बहुमतको लागि, एक मुख्य एक संगठित समूह मा यात्रा को बेफाइदाहरू त्यो तपाईं कार्यक्रम र 'योजना' मा छन् कि सबै भ्रमणका साथ अनुपालन छ। धेरै व्यक्तिहरूको लागि यो तनावको एक खास समय हुन्छ जब तपाईं बढी हुन चाहानुहुन्छ। कहिलेकाँही दिनको केहि बिन्दुहरू ढिला हुन्छन्। किनकि 30० जनालाई दुई जनाको तुलनामा व्यवस्थित गर्नु समान छैन। तसर्थ, तालिकाको मुद्दा यस अवस्थामा एक बेफाइदा हो। सुधारको लागि समय हुँदैन र साथै, हामी सबै उमेरका मानिसहरूसँग हुनेछौं। त्यसोभए तपाईले जहिले पनि ती सबैलाई अनुकूल बनाउनु पर्छ। यस प्रकारको यात्रा सामान्यतया अलि बढी महँगो हुन्छ भन्ने तथ्यका साथै हामी पहिले नै संगठित सबै कुराको साथ जान्छौं र यसको अर्थ ती 'अतिरिक्त' लाई भुक्तान गर्नु हो।
दुबै विकल्पहरू अलग अलग हेरेपछि र फाइदाका साथ साथ बेफाइदाहरू पनि थपिए पछि स्टक लिने जस्तो केही छैन। यो स्पष्ट छ कि यो जहिले पनि प्रत्येकको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ। किनभने यदि तपाईं थोरै बढी तिर्न रुचाउनुहुन्छ तर आयोजनको बारेमा भुल्नुहोस्, टिकट खरीद गर्ने र आरक्षण गर्नुहोस्, तब सबै भन्दा राम्रो कुरा संगठित समूह हो। हो, जीवन अनुभवको रूपमा, सायद एक्लै यात्रा गर्नु सधैं राम्रो विकल्प हुन्छ। यसका अतिरिक्त तपाईं सुधार गर्न र कार्यतालिका स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ जुन केवल तपाईंले निर्णय गर्नुभयो।
तपाईले देख्नु भए जस्तो हामी गर्न सक्दैनौं एक्लै वा संगठित समूहमा यात्रा गर्न सिफारिस गर्नुहोस्, किनकि यो सँधै तपाईंको रुचि वा आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ। तर हामी तपाईंलाई भन्न सक्छौं कि, कम्तिमा एक पटक दुबै विकल्पहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। किनकि दुबैमा तपाईंले फाइदा पाउनुहुनेछ जुन राम्रोसँग रमाइलोको रूपमा हुन्छ। यदि कुनै नोक्सान देखा पर्‍यो भने निश्चित रूपमा हामी यसलाई कुशल तरिकाले भन्दा पनि हल गर्न सक्षम हुनेछौं। र तपाई कुन रोज्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » एक्लै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा एक संगठित समूहमा?